Dimensions မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
12 / 08 / 2021 12 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 336 Views စာ0မှတ်ချက် 21103 အဆိုပါ DeLorean အချိန်စက်, 21109 Exo ဝတ်စုံကို, 21304 ဆရာဝန်အဘယ်သူသည်, 21315 Pop Up စာအုပ်, 21315 Pop-Up စာအုပ်, 21317 Steamboat ဝီလီ, 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, 21324 123 နှမ်းလမ်း, ၂၁၃၂၆ Winnie the Pooh, 76051 စူပါသူရဲကောင်းလေဆိပ်တိုက်ပွဲ, ပြန်အနာဂတ်အား, ဗိုလ်ကြီး Redbeard, DeLorean, ရှုထောင့်, Disney, Elmo, ပန်ကာ, ပန်ကာဒီဇိုင်း, ပန်ကာဒီဇိုင်း, ဘီလူး, Manရာလူသား, iantရာမလူသား, Ideas, Lego, Lego အရွယ်အစား, Lego Disney, Lego Ideas, Lego Minifigures, Marty McFly, ကို Mickey, မစ်ကီမောက်စ်, အသေးစား, သေးသေးလေး, အနားယူသည်, Lego အနားယူသည်, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, နှမ်းလမ်း, Steamboat ဝီလီ, Winnie ဟာ Pooh
LEGO Dimensions ကို Jukebox အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း
16 / 09 / 2020 17 / 09 / 2020 ဂရေဟမ် 882 Views စာ0မှတ်ချက် ရှုထောင့်, hack က, Lego အရွယ်အစား, YouTube ကို
LEGO Dimensions ပေါ်တယ်ကိုမတူကွဲပြားသောပုံသဏ္toာန်များကိုတုန့်ပြန်သော jukebox အဖြစ်ပြန်လည်နေရာချခဲ့သည်။ LEGO အရွယ်အစားကဘာလဲ
LEGO Dimensions ကိုတရားဝင်ပြီးဆုံးပါပြီ
23 / 10 / 2017 23 / 10 / 2017 ဂရေဟမ် 1137 Views စာ0မှတ်ချက် ရှုထောင့်, Lego, Lego အရွယ်အစား, အဆိုပါ LEGO Group, TT အားကစားပြိုင်ပွဲ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, WB ဂိမ်းများ
မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သော LEGO Dimensions အထုပ်များသည်နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသောစကားလုံးထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်သတင်းများထွက်လာပြီဖြစ်သည်
LEGO Dimensions ၏အဆိတ်ငြိမ်အဆုံး
19 / 10 / 2017 19 / 10 / 2017 ဂရေဟမ် 1168 Views စာ0မှတ်ချက် ရှုထောင့်, Lego, Lego အရွယ်အစား, TT အားကစားပြိုင်ပွဲ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, WB ဂိမ်းများ
တရားဝင်ကြေငြာခြင်းမရှိသော်လည်း LEGO Dimensions သည်မူလရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းပြေးရန်ထက်နှစ်နှစ်အကြာတွင်ပြီးပြည့်စုံသည်ဟုထင်ရသည်
ယခု LEGO Dimensions များကိုရရှိနိုင်သည်
16 / 09 / 2017 16 / 09 / 2017 ဂရေဟမ် 1343 Views စာ0မှတ်ချက် 71255 ဆယ်ကျော်သက် Titans များ Go! Team Pack, 71287 ဆယ်ကျော်သက်ဖို့အတွက် Titans တွေက Go! ပျော်စရာအစီအစဉ်, 71343 အဆိုပါ Powerpuff မိန်းကလေးများပျော်စရာ Pack ကို, 71346 အဆိုပါ Powerpuff မိန်းကလေးများအဖွဲ့ Pack ကို, 71349 Beetlejuice ပျော်စရာ Pack, Beetlejuice, ရှုထောင့်, Lego, Lego အရွယ်အစား, ဆယ်ကျော်သက်ဖို့အတွက် Titans တွေက Go!, Powerpuff မိန်းကလေးများ, TT အားကစားပြိုင်ပွဲ, Warner Bros., WB ဂိမ်းများ
Teen Titans Go! ပေါ်တွင်အခြေခံသည့် LEGO Dimensions Package အသစ် ၅ ခုသည် Powerpuff Girls နှင့် Beetlejuice တို့ကိုပရိသတ်များအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
The Powerpuff Girls သည်နောက်ဆုံးပေါ်နောက်တွဲယာဉ်တွင် LEGO Dimensions များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်
18 / 08 / 2017 ဂရေဟမ် 1364 Views စာ0မှတ်ချက် 71343 Powerpuff မိန်းကလေးများပျော်စရာ Pack, 71346 Powerpuff မိန်းကလေးများအဖွဲ့ Pack, ရှုထောင့်, Lego, Lego အရွယ်အစား, Powerpuff မိန်းကလေးများ, TT အားကစားပြိုင်ပွဲ, WB ဂိမ်းများ
Powerpuff Girls များကို LEGO Dimensions နောက်တွဲယာဉ်အသစ်တစ်ခုတွင်တွေ့ရှိပြီး Team and Fun Packs တွင် multiverse နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
ရှိပါတယ် LEGO Group အကောင်းမြင်မှုအတွက်အကြောင်းရင်းကိုရှာတွေ့ပြီလား။
28 / 06 / 2017 ဂရေဟမ် 1089 Views စာ0မှတ်ချက် ရှုထောင့်, တိုးတက်မှုနှုန်း, Lego, Lego အရွယ်အစား, Lego Star Wars, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group, ကစားစရာစက်မှုလုပ်ငန်း, အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
လေ့လာသုံးသပ်သူများကမူကစားစရာဆောက်လုပ်ရေးစျေးကွက်ကလွှမ်းမိုးထားကြောင်းခန့်မှန်းထားသည် LEGO Group, နောက်ကျော 2017 တွင်လမ်းကြောင်းအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
ဆယ်ကျော်သက်ဖို့အတွက် Titans တွေက Go! အသစ်နောက်တွဲယာဉ်အတွက် LEGO အရွယ်အစားပူးပေါင်းမည်
21 / 06 / 2017 21 / 06 / 2017 ဂရေဟမ် 1184 Views စာ0မှတ်ချက် DC ကရုပ်ပြ, DC ကသူရဲကောင်းများ, ရှုထောင့်, ပျော်စရာအစီအစဉ်, Lego, Lego, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego အရွယ်အစား, အဖွဲ့လိုက်အထုပ်, ဆယ်ကျော်သက်ဖို့အတွက် Titans တွေက Go!, နောကျတှဲရထား, TT အားကစားပြိုင်ပွဲ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, WB ဂိမ်းများ
အာရုံစူးစိုက်မှုအားလုံးသည် E3 ရှိအခြားခေါင်းစဉ်များအပေါ်အာရုံရောက်နေသည်ဆိုပါကဤအသစ်အဆန်းကိုခံစားကြည့်ပါ
Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ E2 ရှိမြေများ ၂
13 / 06 / 2017 ဂရေဟမ် 1240 Views စာ0မှတ်ချက် ရှုထောင့်, Lego, Lego အရွယ်အစား, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ 2, Marvel, Marvel ရုပ်ပြ, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, TT အားကစားပြိုင်ပွဲ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, WB ဂိမ်းများ
ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်ရုံသည်သူတို့လုပ်ခဲ့သည့်အကြောင်းကိုဝေမျှရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသောကြောင့် E3 တွင်အခြေအနေများပိုမိုဆိုးရွားလာသည်